Fayyadama qorichaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 6:26 25 Sadaasa 20216:26 25 Sadaasa 2021
Maalaawiin Maayik Taayisan ambaasaaddara kaanaabis akka tahuuf gaafatte
Biyyi Maalaawii dorgomaan bunyaa beekamaan duraanii Maayik Taayisan ambaasaaddara oomisha kaanaabis akka tahuuf gaaffii dhiyeessite.
...tti maxxanfame 7:12 24 Onkololeessa 20217:12 24 Onkololeessa 2021
US nama mootii qoricha sammuu namaa adoochuu, Dairo Antonio Úsuga, jedhamu kana qabeef ykn bakka jiru himeef dolaara miliyoona 5 akka kennitu waadaa galtee turte. Namni irra caalaa maqaa masoo Otoniyel jedhuun beekamu kun amma qabameera.
...tti maxxanfame 7:37 11 Waxabajjii 20217:37 11 Waxabajjii 2021
Taphataa 'qoricha haadha warraasaa dogongoraanan liqimse' jedheef adabbiin hir'ate
Taphataan kilaba Ayyaaksiifi garee biyya Kaameruuniif karra eegu Andiree Onaanaa qoricha humna namaaf kennu fudhateera jedhamuun adabbii irratti darbee ture akka salphaa ta'uuf taasifame.
...tti maxxanfame 5:05 9 Waxabajjii 20215:05 9 Waxabajjii 2021
Aappiin FBI dhoksaan hojjetaa ture yakkamtoota addunyaa harka poolisiitti dabarsee kenne
Yakkamtootni adunyaa dhibbaan lakkaa'aman karaa ergaa gabaabaa aappii ANOM kan bakka ergaan isaanii irraa dhufu adda baasuun to'annoo jala oolan
...tti maxxanfame 4:08 4 Caamsaa 20214:08 4 Caamsaa 2021
Inistagiraamiin gurgurtaa qoricha nama furdisuun qeeqame
Tajaajilli Fayyaa UK 'NHS' namoota Inistagiraamii irratti qoricha eeyyama hin qabne ''hamaa'' keessumaa shamarran irratti xiyyeeffachuun gurguran akka dhorku gaafate.
...tti maxxanfame 6:31 23 Guraandhala 20216:31 23 Guraandhala 2021
US haadha manaa El Chaapoo yakka 'daddabarsa baala sammuu hadoochuun' hiite
Haati manaa lammii Meksiikoo gooftaa daddabarsa qoricha sammuu hadoochuu jedhamuun beekamu Joyaakim ''El Chaapo'' Guuzmaan daddabarsa baala sammuu hadoochuun shakkamuun Ameerikaatti hidhamte jedhan qondaalonni US.
...tti maxxanfame 6:11 21 Fuulbaana 20206:11 21 Fuulbaana 2020
WHO'n qoricha aadaa Afrikaa Covid-19 fayyisa jedhame yaaluuf murteesse
Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa qorichoota aadaa Afrikaa Covid19 fayyisu jedhaman irrtti yaalii taasisuuf murteessee
...tti maxxanfame 10:53 17 Waxabajjii 202010:53 17 Waxabajjii 2020
'Dexamethasone' qoricha akkamiiti?, Itoophiyaa keessa hagam jira?
Qorichi garee qorichoota 'gilukookortiikooyid' jedhaman jalatti ramadamu kun, Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraaf ogeeyyiin fayyaa itti fayyadamaa akka turan hima ogeessi BBC'n dubbise.
...tti maxxanfame 10:51 3 Waxabajjii 202010:51 3 Waxabajjii 2020
Ayibuupiroofin Covid-19’f qorichummaa akka qabu qoratamaa jira
Ayibuupiroofin jalqaba weerara kanaarra fayyadamuun sodaachisee tureImage caption: Ayibuupiroofin jalqaba weerara kanaarra fayyadamuun sodaachisee ture
Saayintistoonni ayibuupiroofin namoota koroonaavaayirasiin dhukkubsachaa jiraniif qorichummaa qabaachuusaa baruuf yaaliirra jiru.
Gareen ‘London's Guy's’ fi hospitaala Seent Toomas yaaliin rakasni kun dhukkubsattoonni veentileetaroota qaalii ta’aniin gargaaramuu irraa akka wayaa'an godha jedhanii abdatu.
Yaalii kanaanis dhukkubsattoonni gariin kunuunsa idileen dabalata ayibuupiroofin ni kennamaaf.
Qorichi kunis kan duraan kan namoonni bitatanirraa adda ta’ee kan qophaa’u ta’a.
Qorannoon bineeldota irratti taasifame,dawaan kun rakkoo sirna hargansuu mallattoo koroonaavaayiras hamaa ta’e akka hir’isu agarsiisanii jiru.
Miseensa garee kanaa kan ta’an Pirofesar Mituul Mehitaa, ‘‘Waan yaadaa jirru waliin akka wal-simu baruuf yaalii gochuun nurraa eegama.’’ Jedhaniiru.
Jalqaba weerara dhibee kanaarra namoonni mallattoolee sasalphoo qaban ayibuupiroofin fudhannaan tasa itti caaluu danda’a jedhamee sodaatamaa ture.
Ministeerri Fayyaa Faransaayi qorichoota kanneen akka ayibuupiroofin fudhachuun caalaatti dhukkubicha waan hammeessuuf namoonni paaraaseetaamooli akka fudhatan yeroo dubbatanitti, daran kan sodaatame.
Paaraaseetaamooli miidhaa cinaa muraasa qofa waan qabuuf namoonni dursanii isa akka fayyadamaniifi kanneen dhukkuba garaachaa ‘ulcer’ jedhamu qaban ammoo siruma ayibuupiroofin akka hin fudhanne tajaajilli fayyaa biyyaalessaa UK kan gorsu.
...tti maxxanfame 8:02 23 Sadaasa 20198:02 23 Sadaasa 2019
'Maddi araada hundaa midhama keessa darbanidha'
Ogeessi fayyaa Kaanaadaa Gaboor Maat "maddi araada hundaa midhama keessa darbanidha" , kanaaf ilaalcha dhimma kanarratti qabnu sirreessuu qabna jechuun amana. Ilaalchi nuti aradaaf qabnu maaliif dogoggora akka ta'e ni ibsa.